Madzimai ekuChipinge South Oraramisa Mhuri Kuburikidza neKutengesa Mbeva
Nyamavhuvhu 07, 2021
Mbeva imwe chete inonzi iri kutengeswa nemadhora gumi kana madhora makumi maviri emari yemunyika, kana kuti mbeva gumi neshanu dzichitengwa nedhora rimwe rekuAmerica.
Vakawanda kuChipinge South, zvikuru madzimai, vanoti vave kukwanisa kuraramisa mhuri dzavo kuburikidza nekutengesa mbeva dzavanobata muminda yavo.
Mumwe wemadzimai aya, uyo akada chete kungonzi Amai Chipo, kubva zvavatanga kuteya mbeva vachitengesa,vakawanda vave kukwanisawo kutenga zvakawanda zvinosanganisira chikafu, midziyo yemumba, mbatya dzekupfekedza mhuri,uye vamwe vachikwanisawo kutotenga nzvimbo dzekuvakira dzimba.
Amai Chipo vanoti vanonocherera migoro ine mvura muminda yavo vodira nzungu kana chibage zvakakangwa kutenderedza migomo iyi, usiku mbeva dzozouya dzichida kudya dzanzwa kunhuhwira dzichibva dzawira mumvura muya.
Amai Chipo vanoti usiku humwechete vanogona kubata mbeva dzinosvika mazana matanhatu kana kudarika, idzo dzavanozogadzira vokanga vachizonotengesa kumadhorobha akasiyanasiyana.
Vanoti mbeva imwe chete inoita Rand imwechete kana kuti ZWL$20.00, kana kuti mbeva gumi neshanu padhora rimwechete rekuAmerica. Amai Chipo vanotiwo vari kurova shiri mbiri nedombo rimwechete sezvo vari kuwanawo zvakare mafuta ekubikisa kubva mumbeva idzi.
Panyaya yekuti havasi kutengesera vanhu makonzo here, vachiseka zvavo, Amai Chipo vanoti pane musiyano mukuru kwazvo pakati pegonzo nembeva zvekuti havangamboita zvakadaro, vachiti mbeva dzakawandisa kwazvo zvekuti havangabate makonzo vachisiya mbeva.
Asi vanoti havasi kufushira makomba avanenge vachera vachiisa migoro yavo vachipa zvikonzero zvekuti anenge asina kudzika, uye avozofuchirwa nemvura kana yanaya.
​Amai Chipo vanokurudzira vamwe, zvikuru madzimai, kuti vasangomirira chete kuti murume kana baba vemba ndiye achariritira mhuri. Vanotiwo munhu haafanirwe kunyara kuita basa rinomupa mari, kunyange richitarisirwa pasi zvakadii nevamwe.
Hurukuro naAmai Chipo
Madzimai kuChipinge South Voponesa Mhuri neKutengesa Mbeva
Mufundisi Chaka Ngwenya Vobatsira Zvizvarwa zveZimbabwe Kumusha neKunze
Mufundisi Chaka Ngwenya
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Mufundisi Chaka Ngwenya, vanoti vari kufara nekubatana kuri kuita zvizvarwa zveZimbabwe mukubatsira vamwe vari kutarisana nematambudziko panguva ino yeCovid-19.
Mufundisi Ngwenya vanoti vari kushanda pasi pekereke yeSalvation Army neZimbabwe Christian Fellowship yemuguta reNew York kuita zvirongwa zvekubatsira panguva ino yeCovid-19.
Vanoti vanobatsira vanhu nezvekudya, pekugara nekusimbudzira vamwe vanenge vachitarisana nematambudziko ekudzamisa pfungwa panguva ino apo vazhinji vari kutarisana nezvinetswa zvakawanda.
VaNgwenya vanoti vakatanga chimwe chirongwa kumusha chekubatsira vechidiki nemadzimai ekwaZvimba chekuvawanisa zvikwanisiro pamwe nemari nedzidzo kune avo vanoshaya.
"Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew York neAmerica zvandiratidza kuti takabatana muno munyika sezvo tiri kubatirana pamwe kuita zvirongwa zvinobatsira vari muno nekumusha," VaNgwenya vaudza Studio7.
"Takatotanga mumwe mubatanidzwa padandemutande weWhatsApp unononzi ZimFamilyUSA group apo tinopanana mazano ekurarama muAmerica semhuri. Tinokoka vese vari muAmerica kuti vapinde mumu unganidzwa umu kuti tizeye zvakadzama nezvatino sangana nazvo kunze kwenyika,"VaNgwenya vaenderera mberi.
"Takakwanisa kubatanidza mari semhuri yekubatsira mumwe wedu sisi Catherine Mhizha vakashaya mavhiki apfuura kuti vanoradzikwa kumusha. Takaunganidza mari inosvika $32 000 kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica yakakwanisa kuendeswa kumba pamwe chete nemutumbi wemuchakabvu," VaNgwenya vanodaro
Hurukuro naVa Chaka Ngwenya